Gazety Iraniana Nakatona Noho Ny Pejy Voalohany Manasongadina Ny ‘Charlie Aho’ Ahitàna An’i George Clooney · Global Voices teny Malagasy
Gazety Iraniana Nakatona Noho Ny Pejy Voalohany Manasongadina Ny ‘Charlie Aho’ Ahitàna An'i George Clooney
Voadika ny 05 Febroary 2015 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Български, English
Pejy voalohan'ny Mardom-e Emrooz, “Clooney: Charlie koa aho.”
Niteraka fanehoan-kevitra nivaivay nameno ny gazety Iraniana ny fitaterana ilay tifitra nanjo ny Charlie Hebdo tany Parisy.
Nakatona ny Mardom-e Emrooz, gazety manana fironana Reformista, taorian'ny namoahany pejy voalohany nanehoany ny 13 Janoary an'i George Clooney ,ilay Amerikana mpiantsehatra izay namàrana ny kabarim-panekena tao amin'ny Golden Globe tamin'ny fitenenana hoe “Charlie aho”. Fitsarana iray miadidy ny media no namoaka didy nanakatona azy, raha ny Minisitry ny Kolontsaina Silamo sy ny Taridàlana kosa, tomponandraikitra amin'ny resaka gazety no nisintona ny fahazoan-dàlan'ilay gazety.
Io dia narahan'ny pejy voalohany avy amin'ilay gazety henjam-piteny “Vatan-e Emrooz” tamin'ny lohateny hoe “Vonoy i Charlie” ny 20 Janoary.
Vatan-e Emrooz nanao ny pejy voalohany “Vonoy i Charlie”
Olona 17 no maty nandritry ny fanafihana ireo birao tao amin'ilay gazetiboky Frantsay mpanao sary mahatsikaiky Charlie Hebdo ary andro roa hafa taty aoriana tao aminà toeram-pivarotana iray goavana tantanin'ny Jiosy. Nanameloka ilay herisetra ireo Iraniana manampahefana, no sady koa niantso ilay sariitatra tao amin'ilay gazetiboky ho fanafintohinana ho an'ny Silamo.
Nohazavain'i Shahram Rafizadeh, manampahaizana momba ny gazety Iraniana sady mpiandraikitra fandaharana miresaka ny fampahalalam-baovao Iraniana ao amin'ny Radio Farda, tao anaty tafatafa iray ho an'ny Global Voices ny fivoaran'ny fifanakalozan-dresaka eny anivon'ny gazety ao Iran mikasika ilay zava-doza tao Parisy :
Misy fomba fijery roa momba ny Charlie Hebdo. Voalohany, momba ny zavatra ataon'ny Charlie Hebdo ve ilay fanafihana. Ny ankamaroan'ireo gazety sy tantara dia nanome toerana betsaka an'io. Ny [gazety] Kayhan mpandàla ny nentin-drazana aza, namoaka ny tantaran'i Ahmad Khatami, ilay mpitarika fivavahana rehefa andro Zoma ao Tehran izay nanameloka ireo mpanafika ny Charlie Hebdo. Io no nitarika ny famoahana an'i George Clooney tao anatin'ny Mardom-e Emrooz niteny hoe “Charlie Hebdo aho.” Kanefa, avy hatrany taorian'ny nirosoan'ilay gazetiboky Frantsay namoaka ny sariitatra nataon-dry zareo ho an'ny mpaminany Mahometa, nenjehan'ireo henjam-pihetsika ireo reformista sy ireo akaiky ny [filoha Iraniana Hassan] Rouhani noho ny fanohanany ilay gazetiboky, tamin'ny fiampangàna azy ireo ho misaina toy ny Charlie Hebdo, sy nandefa [ny Minisitra Iraniana misahana ny Raharaha Ivelany] Javad Zarif ho toy ny iraka manokana hanatrika ny diabe firaisankina nandritry ny fotoam-pahatsiarovana natao tany Parisy. Ny pejy voalohan'ny Kayhan mamely ny Mardom-e Emrooz araka izany dia fanehoankevitra naterak'io. Ny Alakamisy, nanenjika ny Mardom ny Kayhan, avy eo ny Sabotsy, nakaton-dry zareo tanteraka.
Ny gazety henjam-pihetsika Kayhan, izay mifamatotra akaiky amin'ny ao amin'ny biraon'ny Mpitondra Faratampny ny fitantanana azy, dia nanonta pejy iray nilazany hoe, “Tonga soa amin'ny dihy ofisialy izay asain'ny mpanoratra arahana an-jambany,” narahany sariitatra iray ahitàna Nizeriana mpikatroka mafàna fo izay namindra tao Parisy niantso ireo mpitondra erantany mba hiaraka amin'izy ireo ho an'ireo Nizeriana 2.000 tratry ny vonomoka nataon'ny Boko Haram .
Pejy voalohan'ny Kayhan, ho setrin'ny pejin'ny Mardom-e Emrooz ahitàna an'i George Clooney.
4 herinandro izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana